Tenga Mifepristone powder (84371-65-3) hplc = 98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Mifepristone poda (84371-65-3)
Rating: SKU: 84371-65-3. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukuraira kweMifepristone powder (84371-65-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Mifepristone powder, inozivikanwawo seU RU-486, inonyanya kushandiswa steroidal antiprogesterone iyo inoshandiswa pamwe chete ne misoprostol, inonzi prostaglandin analogue, kuti ibudise kubvisa pamuviri. Uku kubatana kunopfuura 95% inoshanda mukati mekutanga kwemazuva 50 ekudzivirira. Inobatsirawo mune yechipiri chetatu yekuzvitakura.
Mifepristone powder Basic Characters
Name: Mifepristone powder
Molecular Kurema: 429.59
Storage Temp: 1806241-263-5
Alpha: D20 + 138.5 ° (c = 0.5 mu chloroform)
Storage Temp .: 2-8 ° C
Color: Pfupa yejena
Mifepristone powder kushandiswa mukufamba
Mifepristone powder (RU-486), Mifegyne, Mifeprex, vamwe
Inoshanda sei Mifepristone powder
Mifepristone powder yakashandiswa kwevhiki ye10th yekuzvitakura (70 mazuva mushure mekupedzisira kwekuenda kumwedzi). Ichagumisa pfuma yako yepanyama (progesterone) inoda kuti pamuviri upfuurire. Inowanzoshandiswa nemumwe mushonga unonzi misoprostol. Kuti uone kuti iwe uri munzvimbo yakakodzera kana iwe uchitora misoprostol nokuti kubuda ropa, mavara, nenyuchi, uye diarrhea zvinowanzotanga mukati me2 kusvika maawa 24 mushure mekutora asi zvinogona kutanga mukati ma2 maawa. Vaginal ropa kana kutarisa kazhinji kunotora 9 kune mazuva 16 asi inogona kugara kwemazuva 30 kana kupfuura. Unofanirwa kudzokera kune chiremba wako kunoongorora kana ultrasound 7 mumazuva 14 mushure mokutora Mifepristone powder kuti uone kuti kutora kwapera uye kutarisa kuwanda kweropa. Tora Mifepristone powder sezvakataurwa.
Iko yakachengeteka kushandisa Mifepristone powder
Mifepristone poda uye misoprostol hazviite mukuda kwekutarisa munzvimbo yekiriniki. “Kushandiswa kwakaringana kweMifepristone powder uye misoprostol kuri nyore. Kusiyana nemimwe mishonga, yakadai se doxorubicin kana penicillin yejekiseni, kuongorora kunofanirwa kuitwa pasi pekutarisirwa nachiremba kuti aone kukurumidza uye kunogona kuuraya maitiro, Mifepristone powder. Haisi misoprostol kana yakaoma dosing uye haina kusanganisira kuongorora mamiriro akaoma kana ane njodzi nekukurumidza panguva kana nekukurumidza mushure mekuita dosing.
Yambiro paMifepristone powder
Hazvizivikanwe kana kutora Mifepristone powder kuchawedzera dambudziko rako rekubuda ropa zvakanyanya. Vanenge vose vakadzi vakashandisa mifepristone powder / misoprostol regimen vakawana mavhareji emasikati 9-16 emarwadzo emimba, uterine makumbo, uye kubuda kwechikadzi kana kuonekwa. Kusvikira ku8% yevakadzi vanoona rumwe rudzi rwekubuda ropa mukati meZXNUM days kana kupfuura. Zvimwe zvikamu zvishoma zvinowanzoitika zvinosanganisira kuora mwoyo, kushaya simba, kurutsa, chirwere, chirwere, kuneta, uye fivhiri. Kana izvi zvinoguma kwenguva yakareba kudarika maawa ekutanga e30 mushure mokutora wechipiri mishonga (misoprostol), tsvaka rubatsiro rwekurapa munguva pfupi sezvo zvichigona kuva dambudziko rekurapa.
Mifepristone poda seyakakurumidza kubata pamuviri mushure mekuita zvepabonde zvisina kudzivirirwa ('mangwanani-mushure mepiritsi'); kurapa mamota europi, endometriosis (kukura kwechibereko chechibereko kunze kwechibereko), kana fibroids (noncancerous tumors muchibereko); kana kukurudzira basa (kubatsira kutanga kuberekwa mumukadzi ane pamuviri). Mifepristone poda haifanire kushandiswa kana iwe uine nhumbu isingawanzoitika iri kunze kwechibereko (ectopic nhumbu). Izvo hazvikonzere kubvisa nhumbu mune ino kesi. Zvinogona kukonzera ectopic nhumbu kuputika, zvichikonzera kubuda ropa kwakanyanya.
Kubhekwa nekuputika kunowanzoreva kuti mushonga uri kushanda mukurapa uku, asi kunwa uye kubuda ropa kunogona kuitika dzimwe nguva uye kuchiri kuratidza kubata. Nokudaro, unofanira kudzokera kushanyira kwaunoenda kune chiremba wako nekunyunyuta uye expectoration inogona kuwedzera mukati meawa 24 mushure mekutora wechipiri chemishonga (Misoprostol). Chiremba wako anogona kukuraira kuti utore mamwe mishonga kuti ubatsire kubata zviratidzo izvi. Kana chimwe chezviitiko izvi chikaramba chiripo kana chakaipa, taurira chiremba wako kana mhizimisi pakarepo. Kuchenesa uye kuongorora kunogona kupedza mazuva e30 uye inogona kuva yakaoma kukunda yakasarudzwa. Muzviitiko zvisingaiti, kubuda uku kunofanira kubviswa nekuvhiyiwa. Kana uri kubuda ropa zvakakwana, soak 2 full-size hygiene napkins maawa 2 pazuva, kana kushungurudzika pamusoro pekubuda ropa, tsvaka rubatsiro rwechiremba pakarepo.
Kana ichi chirwere (Mifepristone powder tablet) hachishandi mumazuva e2, chiremba wako angakupa imwe mushonga. Kana uchinge uine marwadzo emimba, utera, dumbu rinoshungurudza kana kurutsa kana chirwere (((diarrhea), tapota danai chiremba wako pakarepo kana iwe wakatora mimwe mishonga kwemaawa anopfuura 24. iwe unowana zviratidzo zvepi zvese zvinokonzera kugadzirisa zvinosanganisira: kuputika, kuchenesa / kupfugama (kunyanya chiso / rurimi / throat), chirume chakasimba, kufema kunetseka, kutsvaga kurapwa pakarepo.
Yeuka kuti chiremba wako atotanga mishonga iyi nokuti iye atoona kuti kubatsirwa kwako kwakanyanya kudarika ngozi yemigumisiro. Kana uine chimwe chezviitiko zvinotevera zvisingaoneki asi zvakakomba nemigumisiro yakaipa, dana chiremba wako kana kuti kudana kunorapwa mhirizhonga pakarepo: fever pamusoro pe 100.4 ° F (38 ° C) kwemaawa anopfuura 4, kurwadziwa kwakanyanya kana kuti unyoro pasi pechiuno, Cold , moyo wekima kana syncope.
Iri haisi rondedzero yakakwana yemigumisiro yemigumisiro. Kana zvimwe zviitiko zvaunoona zvisingarevi pamusoro apa, pls taura nachiremba wako kana wemishonga pakarepo.
Nzira yekutenga Mifepristone powder kubva kuAASraw